>water festival inTachilake | MoeMaKa Burmese News & Media
နိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ ဘလော့ http://www.99sanay.com/ မှာ ၁၄ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေ၊ စာတွေကို ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
“လူတွေက ငလျင်လှုပ်ခံထားရတာ မကြာသေးတာမို့ သင်္ကြန်ကို ခါတိုင်းလောက် သိပ်ရင်ခုန်ခဲ့ကြပုံ မရဘူး။ ရေကစားကြတဲ့ထဲမှာ လူငယ်တွေပဲများခဲ့တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
အနောက်ကဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ဝတ်စားထားတာတွေက သိပ်မလိုက်ဖက်သလိုပဲ
မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပျော်ပါးကြတဲ့ ချောင်း….
“တာချီလိတ်မှာ လည်စရာနေရာ များများစားစားမရှိပါဘူး…. နှစ်တိုင်း ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာပဲဆိုပေမယ့် နှစ်သစ်လေးကို လူတွေက ရှိတာလေးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျော်ဖြတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ ဘလော့လာလည်သူတွေ အားလုံးလည်း နှစ်သစ်အတာသင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ” လို့ နိဂုံးချုပ်ထားပါတယ်။